Jamaica Waxay Diyaar U Tahay Kulamo Muhiim Ah Oo Ay La Yeeshay Saaxiibada Canada Iyo USA
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Jamaica Waxay Diyaar U Tahay Kulamo Muhiim Ah Oo Ay La Yeeshay Saaxiibada Canada Iyo USA
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka
Wasiirka Dalxiiska Jamaica iyo Maaliyadda & JHTA Saamaynta Cushurnimada ee COVID-19 ee Shaqaalaha Dalxiiska
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, oo ay weheliyaan saraakiil sarsare oo kale oo dalxiis ah, ayaa ka qaybgeli doona shirar isdaba joog ah oo ka dhici doona labada suuq ee ugu weyn jasiiradda, Mareykanka iyo Kanada, oo bilaaban doona berri, si loogu dadaalo in la kordhiyo dadka imanaya halka loo socdo iyo sidoo kale kobcinta maalgashi dheeraad ah. qaybta dalxiiska.
Jasiiradda Jamaica waxay ka shaqeyneysaa sidii ay u dabooli lahayd caqabadda safarka ku dhaca mowjadda saddexaad ee COVID-19.
CDC -da ayaa sidoo kale dhowaan dalka u aqoonsatay Heerka 4 -aad oo leh heerar aad u sarreeya oo ah coronavirus.
Kulamadan waxaa loo qorsheeyay si loo xoojiyo la -hawlgalayaasha dalxiiska sidaa darteed waxay sii wadi doonaan suuq -geynta meesha loo socdo.
Bartlett wuxuu xusay in safarka uu yahay mid muhiim ah, maadaama xogta ay heshay Wasaaraddu ay muujineyso in dalabka safarka Jamaica uu hoos u dhacay 7dii maalmood ee la soo dhaafay. Wuxuu rumeysan yahay in “tani ay ka dhalatay caqabadaha ka dhashay mowjadda saddexaad ee COVID-19 ee saameysay jasiiradda, iyo sidoo kale, Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) ee heerka 4 ee ugu dambeeyay, oo la siiyay Jamaica heerar aad u sarreeya oo ah COVID-19. ”
"Jamaica ayaa weli ah meel ammaan ah waxaana rabnaa inaan u xaqiijinno danaha dalxiiska ee arrintan. Arrin muhiim ah ayaa ah Waddooyinkeenna Dib -u -Celinta Dalxiiska, oo leh heerka caabuqa oo ka hooseeya 1%. Badeecadeenu waxay ahaanaysaa mid xoog badan runtiina waa maskaxda ugu sareysa, inkastoo ay jiraan caqabado. Sidaa darteed waxaan sii wadi doonnaa inaan wadno qabanqaabinta suuqgeynta si loo yareeyo wax kasta oo dhici kara, ”ayuu yiri Bartlett.
Kulamo taxane ah ayaa la qorsheeyey si loogu hawlgaliyo la -hawlgalayaasha dalxiiska, warbaahinta iyo daneeyayaasha kale ee USA iyo Canada, si loo xaqiijiyo loona xoojiyo kalsoonida mashaariicdooda maalgashiga ee sii socda iyo suuqgeynta meesha loo socdo.
Wasiirka, oo maanta jasiiradda ka tegay, isaga iyo Agaasimaha Dalxiiska, Donovan White; Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Jamaica, John Lynch, iyo sidoo kale Istaraatijiyadda Sare ee Wasaaradda Dalxiiska, Delano Seiveright, ayaa la kulmi doona maalgashadayaasha waaweyn ee dalxiiska.
Inta ay ku sugan yihiin Mareykanka, kooxda saraakiisha dalxiiska ayaa sidoo kale loo qorsheeyay inay la kulmaan madaxda shirkadaha American Airlines iyo Southwest Airlines. Waxay sidoo kale la kulmi doonaan mas'uuliyiin ka socda khadadka waaweyn ee safarka sida Royal Caribbean iyo Carnival iyo sidoo kale maamuleyaal ka socda Expedia, Inc., wakaaladda safarka ugu weyn ee internetka adduunka, shirkadda saddexaad ee safarka ugu weyn Mareykanka, iyo safarka afaraad ee ugu weyn shirkadda dunida.
Kulammada kale ee Kanada waxay diiradda saari doonaan suuqgeynta waxayna ku fidin doonaan dhammaan shuraakada muhiimka ah oo ay ku jiraan shirkadaha diyaaradaha, sida Air Canada, WestJet, Sunwing, Transat iyo Swoop. Sidoo kale, waxay la kulmi doonaan hawl -wadeennada dalxiiska, maalgashadayaasha dalxiiska, ganacsiga iyo warbaahinta guud iyo daneeyayaasha muhiimka ah ee Qurba -joogta.
“Waxaan dooneynaa inaan u xaqiijinno la -hawlgalayaasheenna, iyo booqdayaashayada inaan sameyneyno wax walba oo aan awoodno si aan u hubinno in booqashadooda jasiiradda ay dhab ahaan noqon doonto mid badbaado leh. Borotokoolladeenu waxay diyaar u yihiin inay hubiyaan inaad awoodi doontaan inaad soo booqataan jiidashadayada oo aad lahaataan khibrad dhab ah oo Jamaican ah, laakiin si ammaan ah oo aan kala go 'lahayn, ”ayuu yidhi.
“Waxaan kor u qaadnay dadaallada lagu xaqiijinayo in shaqaalaheenna dalxiiska si buuxda loo tallaalo oo aan ka aragnay guulo badan tallaabadan. Sidaa darteed, waxaad ku nasan kartaa in booqdayaashu ay ku sugan yihiin jawi ammaan ah. Dhab ahaantii heerarka iyo qawaaniintayada badbaadada ayaa si weyn looga xusaa adduunka oo dhan waxayna fure u ahaayeen inaan awoodno inaan soo dhaweyno in ka badan 1 milyan oo soo -booqde ah tan iyo markii aan dib u furnay xuduudahayaga, ”ayuu yiri Bartlett.
Wasiir Bartlett iyo xubnaha kale ee kooxda ayaa loo qorsheeyay inay ku noqdaan Jamaica bishii Oktoobar 3, 2021.
Kiisaska COVID ee ugu sarreeya weligood oo ku sii kordhaya Hawaii Inta ...